Cessna Tigidka Excel XLS + FSX & P3D ailerons / diyaarad aan la shaqeeyo xaq u
Su'aal Cessna Tigidka Excel XLS + FSX & P3D ailerons / diyaarad aan la shaqeeyo xaq u
sano 2 2 todobaad ka hor #648 by julian1245
Hello Rikoooo i jeclaan lahaa in aad weydiiso guys ku saabsan diyaarad this. Lay jecel diyaarad this ee MFSXS oo waa weyn, lakiin im ogaanaya dhibaato la diyaarada in uu yahay dhab ahaan wax aad looga xumaado i. Waa Dicumintiyo la ailerons halkaas oo marka aad gaadho ay jecel yihiin spazz baxay. Diyaarad jirsado, laakiin waxa ay u muuqataa macquul ahayn i wareegaya haddii aad kari waayay, by fursad kasta, ka eeg oo u hagaajin la eg version a updated ama wax run ahaantii aad baan u jecelahay lahaa haddii ay ahayd arin sababtoo ah im isagoo xiiso weyn oo diyaarada. Im ma hubo haddii ay wax la kulanka ama haddii im wax qalad ah markii im u rakibidda.
Thanks ii soo sheeg haddii aad heshay fikrado wax.